iPhone 3G - Nhau dze iPhone | IPhone nhau
El iPhone 3G Ndiyo yechipiri iPhone yakatangwa neApple, yekutanga kuvhurwa pasirese, yakaiswa pakutengeswa muna Chikunguru 11, 2008. Chinhu chayo chikuru ndeche Kubatana kwe3G, iyo GPS yakabatsirwa uye yepurasitiki chikamu chekumashure chinowanikwa mune maviri mavara, nhema uye chena. Iyo ine 2 Megapixel kamera, 128MB ye RAM uye processor 412 MHz.Inowanikwa nehunyanzvi hwe8 uye 16 GB, asi iyo chena modhi inogona kuwanikwa chete ne16 GB.
Mazuva ano hatimire kutaura nezve iOS 11, asi chokwadi ndechekuti iyo Apple nyika inogadzira zviuru ...
Dhata roaching kugona kutumira uye kugashira ruzivo pane nhare mbozha kunze kwenzvimbo dze ...
Kutanga June 9, akati wandei maPhones nemaMacs anozoshaya basa
Kune mazhinji Mac uye iPhone mamodheru, Chikumi ichave inosimbisa, kunyanya kune varidzi vanoda Apple ku…
WhiteD00r: isa iOS 5 pane yako iPhone 3G kana 2G
kubudikidza Gonzalo R. inoita 10 makore .
Sezvamunoziva, iyo iPhone 3G yasiyiwa kunze kweazvino iOS 5 kugadzirisa, asi vakomana pa ...
WhiteD00r 4.2 Tsika Firmwares iOS 4.2.1 ye iPhone 2G uye 3G (iPod Kubata 1G uye 2G)
Kana iwe uine chinyakare chishandiso, iwe unenge watove uchifungidzira kuti Apple haisi kuzogadziridza chako chishandiso, asi kana iwe uchida iyo ...
Firmware 4.2.1 ye iPhone 3G isingashandure iyo Baseband (ine jailbreak)
Nezuro takaburitsa firmware 4.2.1 ye iPhone 3GS isingaise iyo baseband (unogona kuiwana pano). Uye isu tinogamuchira zvikumbiro zvakawanda ...
10 maapplication evatsva
kubudikidza alexdef inoita 11 makore .
Hazvina kujairika kune vatsva kune iyo iPhone nyika - mushure mekisimusi, vashoma - vanodzungaira vachikumbira ...
Kuva netariro: zvachose kuvhura iyo iPhone 3G
Iwe unofanirwa kuva netariro, chokwadi chekuti Apple inoregedza kugadzirisa kune iyo iPhone 3G ine divi rakanaka, ine ...